Banyere Anyị - Tai na-ebi akwụkwọ & nkwakọ ngwaahịa Co., Ltd.
Tai na obibi & nkwakọ ngwaahịa Co., Ltd.
Companylọ ọrụ ahụ jikọrọ aka na Shanghai Anxin Packaging, Henan Lufeng Packaging, Zhejiang Xinya Packaging, Jiangsu Shanyi Packaging, na Zhejiang Dazuo Packaging. Ọ bụ ụlọ ọrụ na-arụpụta ma na-ere usoro dị iche iche nke ibipụta na ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa. Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ọ bụla na-emepụta usoro dị iche iche nke ngwaahịa, ụlọ ọrụ guzobere nwere ike ịnwe ngwaahịa zuru oke karị nke nwere ike ịhazi na ijere ndị ahịa ọhụụ na ndị ochie ozi.
Tai na nkwakọ ngwaahịa mepụtara site na Shanghai Anxin. Anyị bụ ndị a na-ebi akwụkwọ na nkwakọ ụlọ ọrụ na a akụkọ ihe mere eme nke 30 afọ. N'ihi mmụba nke ngwaahịa ngwaahịa, anyị agbakwunyela nkwakọ ngwaahịa Henan Lufeng, nkwakọ ngwaahịa Zhejiang Xinya, nkwakọ ngwaahịa Zhejiang Dazuo, nkwakọ ngwaahịa jaket Jiangsu na ụlọ ọrụ ndị ọzọ iji gbasaa ngwaahịa anyị, Ngwaahịa anyị gụnyere Igbe Ngosiputa Ngwa, Igbe Akara, Igbe Ndị Akwụkwụ, Igbe Ozi, Uwe ejiji, Igbe Mbupu, Mpempe akwụkwọ, Akpa Akwụkwọ, Igbe Onyinye wdg.
Anyị nwere 30 afọ nke n'ichepụta ahụmịhe n'ọhịa nke mpempe akwụkwọ, na-etinye aka n'inye nnukwu njedebe, igbe ọhụụ ọhụrụ nke igbe igbe, anyị nwere otu ndị na-emepụta ngwa ahịa nọọrọ onwe ha, ndị ahịa nwere atụmatụ atụmatụ ngwugwu zuru oke, dị ka onye tozuru etozu, ogo abụrụla anyị mbụ na naanị standard.Our Qc systemincludes iQc, iPQc na QA na usoro njikwa njikwa ndị ọzọ. N'oge ndị a, anyị enwegoro ngwa ọrụ mepụtara, gụnyere igwe obibi akwụkwọ, igwe ihe mpempe akwụkwọ, igwe ọnwụ, ihe eji laminating, ngwa ngwa gluing igwe na ihe ndị ọzọ. Na akpaka mmepụta akara andsemi-akpaka ntuziaka akara, nwere ike izute dị iche iche ngwaahịa productionneeds. Anyị gafere IS09001, FSC, GMl na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ, n'otu oge ahụ nwere ike ịnye ngwaahịa ịkwakọ ngwaahịa gburugburu ebe obibi.
Karịsịa na-arụpụta igbe agba dị iche iche, igbe nkwakọ ngwaahịa ịchọ mma na kaadiboodu corrugated
nwere ọhụrụ ise oyi akwa corrugated kaadiboodu mmepụta akara, elu-definition kaadiboodu anọ agba ebi akwụkwọ igwe, elu-definition ukwu ukwu ukwu-ebi akwụkwọ igwe, Heidelberg 6-agba ígwè obibi akwụkwọ igwe, akpaka anwụ-ịcha igwe, agba igbe akpụ na pasting igwe. Mepụta ụdị kaadiboodu, katọn, igbe agba agba, wdg. Maka nkwakọ ngwaahịa.
Thelọ ọrụ ahụ nwere igwe obibi akwụkwọ 13 dị na ya, gụnyere Heidelberg agba ise nwere agba ise, agba ise, agba isii, na 7 + 1 UV na-ebi akwụkwọ nrụpụta nano, nke na-ewepụta igbe agba dị iche iche, akpa akwụkwọ, na akpa mkpuchi kraft. Dị iche iche ụlọ, wdg
2 3-oyi akwa E-ụdị na F-ụdị corrugated mmepụta edoghi na dị iche iche downstream onye-nkwụsị ngwá, tumadi na-amị mma n'ime igbe, dị iche iche acha corrugated kaadiboodu, na akwụkwọ igbe.
Nwere igwe-agba agba agba agba agba 5 agba, igwe na-egbu ihe akpaka, na eriri igbe igbe igbe akpaka 5. Karịsịa mepụta akpa onyinye na igbe onyinye.
Kpọtụrụ anyị ka ị mụtakwuo
Lamination Onyinye Box, Igbe Onyinye, Igbe Onyinye Ngosiputa Ngwa, Corrugated Carton Box, Nkwalite Onyinye, Bag Nkwado,